Xaaji Cali Galkacyo oo ka guuleystay Azhar Qardho ee miiska aqoonta ee Daljir. [Akhris …] – Radio Daljir
Xaaji Cali Galkacyo oo ka guuleystay Azhar Qardho ee miiska aqoonta ee Daljir. [Akhris …]
Bossaso, Sept ? 06 – Gugsiga sare ee Xaaji Cali Bixii Galkacyo ayaa caawa ka guuleystay dugsiga Azhar Qardho ka dib markii ay foodda isku dareen miiska aqoonta ee Daljir ee Tartan iyo Tacliin halkaasi oo caawa ay labada dhinacba wacdaro muujiyeen.
Labada dhinac ee tartanku caawa dhexmaray ayaa mid kiiba la weydiiyey 8 su?aalood sidii uu tartanku horayba ugu socday, sidii loo kale guleystayna waxaa ku dhawaaqay madaxa waxbarashada ee Dalladda dugsiyada ahliga ah ee Puntland C/laahi Cali Xuseen.
Dugsiga Xaaji Cali Biixi ayaa helay 10 dhibcood halka dugsiga Azhar Qardho uu helay 7 dhibcood halkaas oo uu ku guuleystay Xaaji Cali Bixii Galkacyo sidaasna uu ugu soo baxay wareega sadexaad iyadoo xalayna uu wareegga sadexaad u gudbay dugsiga Muntadda Burtinle.
Habeen dambe ayaa waxaa miiska aqoonta ee Daljir isku arki doona labada dugsi sare ee kale ah Bossaso Secondry iyo Cumar Samatar Galkacyo.
Barnaamijkan oo si toos looga dhageysanayo dhammaan deeganada Puntland ayaa waxaa aad si toos ugala socon doontaan Website-ka Daljir marka uu bilaamo ilaa marka uu dhmaado.